एकै दिन २३ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ? — Sanchar Kendra
एकै दिन २३ सय रुपैयाँले घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
काठमाडौँ । आइतबार एकै दिन सुनको मूल्य तोलामा २ हजार ३ सय रुपैयाँले घटेको छ । साप्ताहिक कारोबारको अन्तिम दिन शुक्रबार नेपाली बजारमा छापावाल सुनको मूलय ९५ हजार ३ सय रुपैयाँ थियो । आइतबार तोलामा २ हजार ३ सय रुपैयाँ घटेर आइतबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ९३ हजार कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, शुक्रबार ९४ हजार ८ सय रहेको तेजाबी सुनको मूल्य आइतबार तोलामा २ हजार ३ सय रुपैयाँ घटेर प्रतितोला ९२ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम भएको छ । पछिल्लो केही दिन यता सामान्य अंकले उकालो–ओरालो लागिरहेको सुनको मूल्य बिहीबार पनि तोलामा १ हजार ३ सय रुपैयाँले घटेको थियो ।
आइतबार चाँदीको मूल्य पनि आरालो लागेको छ । शुक्रबार प्रतितोला १ हजार ३ सय ३० रुपैयाँ रहेको चाँदीको मूल्य आइतबार तोलामा ६० रुपैयाँ घटेर प्रतितोला १ हजार २ सय ७० रुपैयाँ कायम भएको छ । कारोवार भइरहेको छ ।